Goodbye Mandriva, Ndewo Fedora 22 | Site na Linux
diazepan | | Nkesa
Nyaahụ anyị mụtara na Mandriva, ụlọ ọrụ ahụ, ọ mechiri. Agụrụ m ọtụtụ okwu mwute na twitter banyere nke a ma achọpụtara m na ọ dị ole na ole yiri ka ha maara na n'ezie Mandriva, ụlọ ọrụ ahụ, anaghịzi ekesa nkesa Linux ruo ọtụtụ afọ. Nkesa nke Mandriva Linux bu OpenMandriva (ma mechaa kporo ya PCLinuxOS na Mageia).
Dịkwa ka mmadụ si tweeted, "FOSS bụ FOSS." Ọ bụ eziokwu! Nke ahụ bụ ike nke ngwanrọ na-emeghe na nke emeghe nke na-eme ka ọrụ dị ndụ, ọ bụ ya mere m ji chee na ịmepụta Mandrake Linux afọ 17 gara aga abụghị oge zuru ezu 🙂
Ma ugbu a, ka anyị ghara iwute ya, anyị ga-elekwasị anya na nchegbu IT nke taa: nzuzo na njedebe nke Google. Na ọtụtụ ihe ọchị!
Okwu si Gaël Duval, onye guzobere Mandrake. Enwetara Mandriva mmiri mgbe afọ ole na ole na-alụ ọgụ maka enweghị ego na ọtụtụ ndị obodo ya kwagara Mageia (ma ọ bụ Rosa Linux).
Ma n'aka nke ọzọ Fedora 22 wepụtara. Oge a ọ na-abịa na kernel 4.0.4, GNOME 3.16, KDE Plasma 5.3, GCC 5.1 na icing na achicha ahụ: mmalite nke njikwa ngwugwu DNF dị ka onye nọchiri YUM. Emepụtara njikwa ngwungwu a dịka idegharị YUM na njikarịcha ka ukwuu na ọsọ, ojiji nchekwa na ntụkwasị obi mkpebi (maka ụlọ akwụkwọ Hawkey na libsolv), na mgbakwunye na ịkwado Python 3 na ịnwe API ka dikwa nma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Goodbye Mandriva, Ndewo Fedora 22
cunchbang kwukwara nke ọma
Ọnwa anọ gara aga chụrụ ya n'ọrụ
Ee, mana maka ebumnuche dị iche iche, naanị onye nrụpụta na onye nlekọta, kpebiri n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ na ọ bụghị, na ịdị adị adịghị mkpa. Ọ ka dị ndụ na ndụdụ ya n'agbanyeghị.
Zaghachi Elmer Foo
Na ya onwe ya, onye nrụpụta kwupụtara na ịdị adị ya adịkwaghị mkpa, ebe ọ bụ na mkpa nke ndị ọrụ nwere PC nwere obere ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu efu adaala nke ukwuu, ha niile na-ekele ọnụ ala All-in-one (Rasperry Pi, Ardruino ) emeela ka ọ nwekwuo ohere inweta ọtụtụ mmadụ iji PC.
Ọ bụ ihe ihere na Mandriva ahapụla anyị wee cheta na distro a bụ nke izizi emere m na Windows OS; _;
N'okwu m, ọ bụ distro mbụ nke m nwere ike iji dochie anya Windows XP diski nke kpụchara n'oge ahụ.
Nnukwu ihere, ọ bụ otu n'ime nnukwu ọgba aghara na 8 afọ gara aga. Ọ bụ nke mbụ m rụnyere na pc m ma soro m ruo ọtụtụ afọ, maka m n'oge ahụ ihe ịtụnanya. Onye nke ọzọ m jiri na mbido bụ Zenwalk ma ọ nwụọla ọkara.
Nchọpụta ọjọọ distro, m na-eji debian 8.
Ọ bụrụ na ị wụnye Firefox site na nkwụghachi dị na Launchpad PPA, o doro anya na ọ ga-apụta dị ka Ubuntu.
Ihe a bụ ịgbanwe onye ọrụ gị.
Ka ọ dị Mandrake. Daalụ, enwere m uru nke GNU / Linux. (M ka nwere Mandrake 9 CD).
Akwụpụrụ ya ụbọchị ole na ole, enwetara m ozi a maka nri ụtụtụ!
O doro anya na m na-ede ihe na Mageia, yabụ abụ m akụkụ nke nkwụsị m chere. 🙁
Okwu ka odi?
Aga m echere ụbọchị ole na ole iji melite, ọkachasị inye oge iji nkwụghachi m na-eji.
Naanị Chineke ga-anọgide na-echeta ndị mere nzọụkwụ mbụ anyị na Linux na ọkachasị Kde
Ọ dị oke njọ, mandrake (echetaghị m nke ọ bụla) bụ nke mbụ distro iji banye na draịvụ ike m, mgbe ahụ ọtụtụ n'ime ha sooro, mana mandrake bụ nke mbụ, ma nwee nnukwu mwute
Ọ dị njọ, mandriva bụ distro mbụ m jiri ebe ahụ na 2006-2007, enwere m mmasị na ya, ọ bụ ezie na kemgbe 2009 isi distro m bụ fedora, rue 2010 m sooro ụzọ ahụ.
Mageia abụkwaghị otu, nwee ike n'ihi na o nwere ọkwa ọzọ nke Linux, ọ dịkwa m mma ịbụ onye ọzọ.
PS: PCLinuxOS emela okenye karịa mageia na openmandriva?
Zaghachi Gonzalo Martinez
N'okwu m, Mandrake malitere m, ihe karịrị afọ 35 gara aga. enyi na enyi enyi mgbe enweghi.
Ugbu a, a na-ekwutọ ya.
M mere ịgbanwee na Debian, na floppy diski.
Anọgidere m na Debian. mana mkparị Mandrake bụ nke dịkarịa ala. Mgbe amughi gi, ma obu mgbe i kwuru ugwo maka distro na enweghi intaneti. M na-eme. Kedu ihe ihere bụ nke a.
M na-azụta Linux distros, maka afọ 35. Ahụla m ka ha na-eto ma na-apụ n'anya.
AH, PCLinuXOS, nke na-atọ m ọchị, dị ka n definitionomi enweghị nkọwa, dị ka Manjaro.
M na-etinye n’ime igbe ya, jirikwa akwụkwọ ntuziaka na Spanish, nke German mbụ nke SUSE. Site na mgbe Windows amaghi otu esi eme O na nkwonkwo.
Ọfọn, dịkwa na igbe ya, ụdị mbụ nke OS / 2 Warp. Kedu ihe.
Iwunye OS bu ihe ahia.
Na distros ga na-apụ n'anya. Ọ bụ ọrụ na-agwụ ike ịme distro ka naanị ihe na-erughị narị mmadụ ise jiri ya, na-adịgide adịgide, yana OS nke nhọrọ ha. Nke ahụ na-agwụ ike, mgbe ụwa nwere ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ Windows, yana ndị ọrụ Mac, obere ihe, mana ọ dịkwa ọtụtụ nde mmadụ. Ubuntu, opekata mpe nwere ihe dị ka nde 20 na XNUMX. Ma, na-arụ ọrụ ka naanị ole na ole jiri ihe ị chịkọtara wee nye iwu, abaghị uru, na usoro oge / mbọ.
Echere m na ịmepụta distros nwere ike ịbụ ihe efu na nkà. Ndị mmadụ dị ka ndị nke VLC ma ọ bụ Firefox, ejirila nkà ihe ọmụma nke Nnwere Onwe Nkwalite na-eduzi, ma nwee ọganiihu thunde, ama ama. Ọkara ụwa na-eji azịza IT ha, ha nwere ezigbo aha. Ezigbo ndị nwere amamihe na-arụ ọrụ na mmepe distros nwere ike ịrụ ọrụ ka mma ma ọ bụrụ na ha raara talent ahụ iji mepee ngwa ọdịnala dị mma ma baa uru maka ụwa Linux, ọbụnakwa mee ka ha bụrụ ikpo okwu.
Maka m, dịka onye ọrụ Linux, ngwa dị ka OpenShot bara uru karịa ọtụtụ nkesa dị ebe ahụ edepụtara. Achọrọ m ọbụna ka ha mee ya dakọtara na Windows. Itinye otutu onyinye n’ime imeputa ngwa nke choro n’ezie nwere ike di nma karie ime distro (ma obu ihe ndi ozo) mgbe, n’ezie, ya na nuances ha, enwere otutu distros ma ha nile n’eme otu ihe, ma ọ bụ enwere ike ịhazi ya maka ya.
Zaghachi Vladimir Paulino
Enwere m CD nke nsụgharị nsụgharị 7.2 nke m bụ onye ọrụ nganga na mbubreyo 2000, enwere m ike ịkele ndị otu mmepe dị ebube nke mere ka m nwee ike ịbịaru nso, mara ma nọrọ na-adịgide adịgide na ụwa nke Linux, mgbe ọtụtụ gara aga mgbalị, dị ka na RHel 5.1 n'oge okpomọkụ nke '98, ọmụmaatụ.
Taa, nkwado ego m bụ Linux, enweghịzi PC dị umeala ma nọrọ n'ụlọ ka m nwere ike na-ezuru oge ezinaụlọ m, kama dịka sysadmin na gburugburu karịa ndị sava 700 na VmWare yana ihe dị ka ndị ọrụ 20.000.
Adị m afọ 53 ma ana m aga n'ihu na-anụ ụtọ mbọ dị ebube nke ndị ama ama na ndị na-enweghị aha na nnukwu Linux, nnukwu ụwa.
Enwere m ike ịsị:
Daalụ Gaël, Mandrake / Mandriva!
Enweghị m mmasị na Fedora ruo mgbe m nwara Fedora 22, ọ ka nwere nkọwa ụfọdụ mana ihe m na-enweghị mmasị na-emeri na mbipute kachasị ọhụrụ a, enwere m mmasị na ndabara ndabara na ụfọdụ atụmatụ ọhụụ dịka DNF nke na-eziga roba na yum. N'aka nke ọzọ, eziokwu ahụ bụ Gnome 3.16 bụ ihe a na-enwe obi ekele ọ bụ ezie na m ga-eji ụfọdụ esemokwu (afọ nke iji Ubuntu na Linux mint).
Ọfọn m ahapụ njikọ maka ndị chọrọ ịma otu esi etinye fedora, enwere m olile anya na ọ ga-aba uru.
Kedu ka m si nweta nwunye m ka ọ gbanwee gaa Ubuntu
Ọbụna ọtụtụ ihe kpatara iji gbanwee gaa na Office Libre